Business တွေအတွက် SEO မှရရှိနိုင်မဲ့ အဓိကရလဒ် ၅ ချက် -
SEO (Search Engine Optimizing) ဟာဆိုရင် Business Owner တွေရဲ့ Website တွေကို မြန်ဆန်ထိရောက်စေပြီး User-Friendly ဖြစ်စေတဲ့အပြင် Search engine ပေါ်မှာလည်း Ranking မြင့်မားစွာရစေတဲ့ Website ဖြစ်ဖို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုတဲ့ Marketing နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Website ပေါ်ကိုအလားအလာရှိတဲ့ အရည်သွေးပြည့်တဲ့ Potential Customer တွေတိုးပွားလာစေတဲ့အပြင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာ Website Bounce Rate တွေပါပြောင်းလဲတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာအနေနှင့် တူညီတဲ့ အပြိုင် Business နှစ်ခုဟာ တူညီတဲ့ Product ကိုရောင်းချနေပြီး ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်းတူညီနေတယ်ဆိုပါစို့ …အဲ့ဒီ Business နှစ်ခုမှာ တစ်ခုဟာ SEO optimized Website ရှိပြီးအခြားတစ်ခုဟာမရှိဘူးဆိုရင် ဘယ် Business ဟာပိုမိုပြီး Brand awareness ရရှိပြီး Customer တိုးတက်စေမယ်လို့ထင်ပါသလဲ ?? ဘယ် Website ဟာ Local customer တွေကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ? SEO အသုံးပြုထားတဲ့ Website ဟာ ဈေးနှုန်းတူ Product ခြင်းတူနေရင်တောင် Customer ပိုမိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Wednesday May 15th, 2019/ Blog/0Comment